အပိုဆုပေါ်လစီ | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
TopSlotSite offers you matching bonus(es) for your certain deposits at the Site (အ "Eligible Deposit"), အထိ 800 £/€/$ သို့မဟုတ် 8 000 kr bonus (အ "Deposit Bonus Amount").
100% matching bonus of up to 200 £/€/$ သို့မဟုတ်2000 kr bonus on your first deposit;
50% matching bonus of up to 300 £/€/$ သို့မဟုတ်3000 kr bonus on your second deposit;
100% matching bonus of up to 300 £/€/$ သို့မဟုတ်3000 kr bonus on your third deposit.
1.3 Each Player will be issued only once with the Deposit Bonuses (အကောင့်အများအပြားကိုနောက်ထပ်အပိုဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီမည်မဟုတ်, နှင့် TopSlotSite ဆိုထိုကဲ့သို့သောမျိုးစုံအကောင့်ပိတ်ဖို့ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်).
1.4 အဆိုပါအပ်ငွေအပိုဆုကြေးငွေငွေသားအဖြစ်ထုတ်ယူမရနိုငျနှင့်သာဂိမ်းများကစားရန်သုံးနိုင်တယ်. သင်အနည်းဆုံး wagered ပြီးမှသာအသီးအသီးအပ်နှံအပိုဆုများအသုံးပြုခြင်းကနေရရှိခဲ့ဆိုအနိုင်ရရှိရုပ်သိမ်းပေးရန်စေခြင်းငှါ 50 ဆသက်ဆိုင်သောအပ်နှံအပိုဆုပမာဏ. သာ 5% ဗီဒီယိုဖဲချပ်နှင့် / သို့မဟုတ်အာဏာကိုဗီဒီယိုဖဲချပ်များအားလုံးဗားရှင်းအပေါ်ထားရှိကစားနည်းများ၏အပ်ငွေအပိုဆုများအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်မျက်နှာသို့ရေတွက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်; သာ 10% Baccarat ရှိသမျှကိုဗားရှင်းအပေါ်ထားရှိကစားနည်း၏, Blackjack, Roulette, ထီပေါက်, နှင့် / သို့မဟုတ်ဖဲချပ်စားပွဲဂိမ်းကိုအပ်နှံဆုကြေးငွေများအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်မျက်နှာသို့ရေတွက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်.
1.5 ထိုအပ်ငွေအပိုဆုကြေးငွေသာထက်မနည်းစုစုပေါင်းပမာဏလိုက်ခက်ခဲပါတယ်စေခြင်းငှါအချို့သောတရားစီရင်မှုတွင်တည်ရှိပြီးအဖွဲ့ဝင်များအတွက် 100 ဆအပ်နှံအပိုဆုငွေပမာဏ wagered ခဲ့. ဒီသက်ဆိုင်ရာမှတရားစီရင်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အတွက်, မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်: customersupport@instantgamesupport.com.
1.6 အသီးအသီးအပ်နှံအပိုဆုများ၏အာမခံလိုအပ်ချက်အတွင်းမည်သည့်အချိန်ကာလအတွင်းအပြည့်အဝအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ရဦးမည် 90 သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရရက်ပတ်လုံး. TopSlotSite ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အချိန်မရွေး, ထိုအာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဤအချိန်ကာလအတွင်းအပြည့်အဝအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်သောအရိုသေလေးစားမှုရှိမည်သည့် Deposit အပိုဆုပြန်ရုပ်သိမ်း.
1.7 အားလုံးဂိမ်းများနှင့်အပ်ငွေအပိုဆုကြေးငွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မှဘာသာရပ်များမှာ Terms and Conditions နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန် ယေဘုယျဆုကြေးငွေမူဝါဒကို.
1.11 TopSlotSite reserves the right to alter these terms and conditions, ဖျက်သိမ်း, modify or suspend this offer and any promotion at any time and without prior notice.
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခွအေန (subject to the offering of the Complimentary Bonus by TopSlotSite)
2.5. အဆိုပါ Complimentary အပိုဆုကမ်းလှမ်းမှုကိုသာ TopSlotSite နှင့်အတူ account တစ်ခုမရှိခဲ့ဘူးသောသူအသစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်.
2.6. မဆိုအနိုင်ရရှိ (အ Complimentary အပိုဆု၏ပိုလျှံအတွက်) အ Complimentary အပိုဆုတွေနဲ့ဂိမ်းများကစားခြင်းကနေရလဒ် (အ "ကနဦးအနိုင်ရရှိ") ရွေးနှုတ်တော်မူသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာမရစေခြင်းငှါ. ထိုကနဦးအနိုင်ရရှိအတူဂိမ်းများကစားခြင်းကနေရရှိခဲ့သာလျှင်အနိုင်ရရှိရွေးနှုတ်တော်မူမည်အကြောင်း,, မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်ကြောင်း-ထောက်ပံ့- သငျသညျအနညျးဆုံး wagered 50 ကြိမ်ကိုသင့် Complimentary အပိုဆုတန်းတူအနေနဲ့ငွေပမာဏ + ကနဦးအနိုင်ရရှိ (နှင့် Complimentary အပိုဆုအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ၏ပုံစံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်အဘယ်မှာရှိ – ထိုကနဦးအနိုင်ရရှိတန်းတူအနေနဲ့ငွေပမာဏ). အဆိုပါ 50 (သို့မဟုတ်အခြားဖော်ပြထား) လိုအပ်ချက် wagering ကြိမ်သင့်အကောင့်ကိုသာသင်သိုက်ရန်ပုံငွေများပြီးနောက်စတင်မည်. ဘယ်ကိစ္စမဆို, ထိုကနဦးအနိုင်ရရှိထက်မကျော်လွန်စေခြင်းငှါ £20 / €20 / $20 / 200Kr; ထက်ကျော်လွန်သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့မည်သည့်ကနဦးအနိုင်ရရှိ £20 / €20 / $20 / 200Kr nil ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကြလိမ့်မည်နှငျ့အညီရုတ်သိမ်းပါလိမ့်မည်.
2.7. အ Complimentary အပိုဆုများ၏အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုအတွင်းမည်သည့်အချိန်ကာလအတွင်းအပြည့်အဝအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ရဦးမည်7days of being credited toaplayer's account unless stated otherwise in the bonuses specific terms and conditions. TopSlotSite ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အချိန်မရွေး, ထိုအာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဤအချိန်ကာလအတွင်းအပြည့်အဝအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်သောအရိုသေလေးစားမှုရှိဆို Complimentary အပိုဆုပြန်ရုပ်သိမ်း. ဖြည့်စွက်ကာ, အ Complimentary အပိုဆုကမ်းလှမ်းမှုအတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးလိမ့်မည်7TopSlotSite နှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းမှရက်ပတ်လုံး, သင်သည်ထိုကာလအတွင်းတဦးအတည်ပြုသိုက်စေလျှင်. အတွင်းတစ်ဦးအတည်ပြုသိုက်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်7days from opening an account will lead to revoking the Complimentary Bonus (and any winnings gained from the use of the Complimentary Bonus), even after your account's award of the Complimentary Bonus.
2.9. All Games and the Complimentary Bonus are subject to our Terms and Conditions နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန် ယေဘုယျဆုကြေးငွေမူဝါဒကို..
2.11. အ Complimentary အပိုဆု၏ receiver ကို Complimentary အပိုဆု၏အလက်ခံရရှိ ဆက်စပ်. အတွက်ပေးဆောင်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းအဘို့အတစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ယူရကြလိမ့်မည်.
2.12. TopSlotSite reserves the right to alter these terms and conditions, ဖျက်သိမ်း, modify or suspend this offer and any promotion at any time and without prior notice.
3. အခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေ
3.1 TopSlotSite အခါသမယပေါ်တွင်သင်တစ်ဦးအခမဲ့ Play စအပိုဆုဆက်ကပ်ခြင်းငှါ, ဆုကြေးငွေပိုက်ဆံ၏ပုံစံသို့မဟုတ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများတစ် form မှာ။
3.2 အဆိုပါအခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေငွေသားအဘို့ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်ရွေးနှုတ်တော်မူမရနိုင်.
3.3 သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုအခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေအတွင်းအပြည့်အဝအတွက် wagered / အသုံးပြုရမည်7အပိုဆုကြေးငွေတိကျတဲ့စည်းမျဉ်းများနှင့်အခြေအနေများအတွက်မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရရက်ပတ်လုံး;အတွင်းအခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေကိုအသုံးပြုရန်ပျက်ကွက်ခြင်း7သူတို့ရဲ့လက်ခံရရှိမှပတ်လုံးအခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ် (နှင့်မဆိုအနိုင်ရရှိအခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေများအသုံးပြုခြင်းကနေရရှိခဲ့), even after your account's award of the Free Play Bonuses.
3.4 အခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေမှထုတ်ပေးသည့်အခြေအနေမဆိုအနိုင်ရရှိ (အ "အခမဲ့ကနဦးအနိုင်ရရှိ") သင်သည်သင်၏အခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေများအားလုံးကစားပြီးသောပြီးမှသာသင့်အားပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, စုစုပေါင်းအခမဲ့ကနဦးအနိုင်ရရှိထက်မကျော်လွန်စေခြင်းငှါ £ /€ /$ 20 သို့မဟုတ် 200kr; ထက်ကျော်လွန်သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့မဆိုအခမဲ့ကနဦးအနိုင်ရရှိ £ /€ /$ 20 သို့မဟုတ် 200kr nil ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကြလိမ့်မည်နှငျ့အညီရုတ်သိမ်းပါလိမ့်မည်.
3.5 အဆိုပါအခမဲ့ကနဦးအနိုင်ရရှိတဲ့ဆုကြေးငွေအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်အထွေထွေအပိုဆုပေါ်လစီမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြ၏, the bonus specific terms and conditions and the Terms and Conditions. အထက်ပါမှ derogating မရှိရင်, အခမဲ့ကနဦးအနိုင်ရရှိ၏အာမခံလိုအပ်ချက်များဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည် – မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင် – 50 အခမဲ့ကနဦးအနိုင်ရရှိ၏ကြိမ်။
3.6 TopSlotSite တစ်ဦးပါဝင်သူဤကမ်းလှမ်းချက်ကို ဆက်စပ်. အတွက်မကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်း၌မဆိုလုပ်ရပ်ကွပ်မျက်ခံရနှင့် / သို့မဟုတ်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုအလွဲသုံးစားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီယူဆသောဖြစ်ရပ်အတွက်, ထိုကဲ့သို့သောပါဝင်သူဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်အခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေလက်ခံရရှိရန်အရည်အချင်းမပြည့်မှီဖြစ်လာရကြလိမ့်မည်; ထိုကဲ့သို့သောအရည်အချင်းမပြည့်မှီစိတ်ပိုင်းဖြတ်နှင့်အခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေစေခြင်းငှါ (နှင့်မဆိုအနိုင်ရရှိအခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေများအသုံးပြုခြင်းကနေရရှိခဲ့) withheld or revoked, even after the participant's account's award of the Free Play Bonuses.
3.7 အခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေများလက်ခံအခမဲ့ Play စဆုကြေးငွေများလက်ခံရရှိမှုနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်ပေးဆောင်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းအဘို့အတစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ယူရလိမ့်မည်။
3.8 TopSlotSite reserves the right to alter these terms and conditions, ဖျက်သိမ်း, modify or suspend this offer and any promotion at any time and without prior notice.
3.9 အားလုံးဂိမ်းများနှင့် Free Play Bonuses ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှဘာသာရပ်များမှာ Terms and Conditions
မဆိုမြှင့်တင်ရေးဆုတ်ခွာဖို့လက်ျာကျနော်တို့ချန်ထားသော, မည်သည့်အချိန်တွင်ဆုကြေးငွေသို့မဟုတ်အထူးကမ်းလှမ်းမှုကို. ငါတို့သည်သင်တို့အလွဲသုံးစားလုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆုကြေးငွေသို့မဟုတ်အခြားမြှင့်တင်ရေးအလွဲသုံးစားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကြသည်ယုံကြည်သောဖြစ်ရပ်အတွက်, သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၏မရှိခြင်းအားဖြင့်အကျိုးခံစားရဖို့များပါတယ်, ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ may, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိမှာ, ငွငျးပယျ, မည်သည့်ဆုကြေးငွေသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးမပြောဘဲသို့မဟုတ်သင်မှဆုတ်ခွာ, သို့မဟုတ်သင်မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူမည်သည့်မူဝါဒကို rescind, တစ်ခုခုကိုယာယီသို့မဟုတ်အမြဲတမ်း, သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲမှာကျင်းပမဆိုရန်ပုံငွေဆပ်ဖို့မဆိုတာဝန်အောက်မှာဖြစ်ခြင်းမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် / သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရန်သင့် access ကိုပိတျဆို့.
အဆိုပါချိုးဖောက်မှုများပါဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်, ဆုကြေးငွေမဆို၏အားသာချက်ယူနိုင်ရန်အတွက် Progressplay ကွန်ရက်အတွင်း၌အကောင့်အများအပြားကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့နှင့် / သို့မဟုတ် promotion.Where ကျွန်တော်တို့အလွဲသုံးမှုခွဲခြားသတ်မှတ်, ငါတို့ဝါးမှာအချို့သောဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ကန့်သတ်ပြဌာန်းခွင့်နှင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာသမ္မာသတိကျွန်တော်တို့ချန်ထားသော
အားလုံးပရိုမိုးရှင်း, အပိုဆုကြေးငွေနှင့်အထူးကမ်းလှမ်းမှုမှာစတင်ဖို့ 00:00 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်နှင့်အဆုံးမှာ 23:59 သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲများအပေါ်ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်, unless stated otherwise in the specific promotions', bonus's or special offer's terms and conditions.
ဤမူဝါဒအတွက်အခြားမည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကနေ derogating မရှိရင်, မဆိုထုတ်ယူလုပ်ငန်းများ၌ခင်, သင့်ရဲ့ကစားမဆိုမမှန်ကစားပုံစံများများအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်. တရားမျှတဂိမ်းကစားခြင်းရဲ့အကြိုးစီးပှားခုနှစ်တွင်, တူညီသော, သုညသို့မဟုတ်အနိမ့် margin ကစားနည်းသို့မဟုတ်စောင်ရန်းကိုအလောင်းအစား, အားလုံးဆုကြေးငွေကစား-မှတဆင့်လိုအပ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မမှန်ဂိမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရကြလိမ့်မည်. မမှန်ဂိမ်းကစား၏အခြားဥပမာပါဝင်ပေမယ့်ကန့်သတ်သည်မဟုတ်, တန်းတူသို့မဟုတ်၏အောက်ပိုင်း၏ပိုလျှံအတွက်တစ်ခုတည်းကစားနည်းအားမရ £5 / €5 / $5 / 50Kr သို့မဟုတ် 5% ဆုကြေးငွေ၏တန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်၏အောက်ပိုင်း၏ £2 / €2 / $2 / 20Kr သို့မဟုတ် 2% of the value of the bonus if you madeadeposit via either Neteller or Skrill (including where such limit is exceeded due to any double up or other feature of any game) until such time as the wagering requirements for that bonus have been met. Should we deem that irregular game play has occurred, we reserve the right to withhold any withdrawals, confiscate all winnings and/or block your access to our services and products and/or your account without being under any obligation to pay you any funds held in your account.
အပိုဆုကြေးငွေမှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အားလုံးအနိုင်ရရှိသာထက်မနည်းစုစုပေါင်းပမာဏလိုက်ခက်ခဲပါတယ်စေခြင်းငှါ 50 (ငါးဆယ်) လက်ခံရရှိကြိမ်ဆုကြေးငွေပမာဏကို wagered ခဲ့ (တိကျတဲ့ဆုကြေးငွေသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးများ၏တိကျသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအတွက်မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်); သင်ဤလိုအပ်ချက်တွေ့ဆုံဖို့ကြိုတင်ဆုကြေးငွေပမာဏနှင့်သင့်အကောင့်မှသူတို့ကိုမှစွပ်စွဲမဆိုအနိုင်ရရှိရုပ်သိမ်းပေးရန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒီလိုရန်ပုံငွေဆုတ်ခွာ၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်အကောင့်ချိန်ခွင်လျှာမှနုတ်ယူလိမ့်မည်.
အဆိုပါဆုကြေးငွေပမာဏထွက်ခက်ခဲပါတယ်မရနိုင်, နှင့်အာမခံရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပွုနိုငျ; သံသယများရှောင်ရှားခြင်းအဘို့အ, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုချိန်ခွင်လျှာအတွက်ဆုကြေးငွေပမာဏ၏ပါဝင်ဆုကြေးငွေပမာဏထုတ်ယူနိုင်ပါသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆုကြေးငွေပမာဏဆုတ်ခွာ၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်အကောင့်ချိန်ခွင်လျှာမှနုတ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ.
သင်သည်အခြားဆုကြေးငွေ / es ဟုဆိုကာနေတုန်းတစ်ဆုကြေးငွေ၏အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ဖို့သေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်မည်သည့်ဆက်တိုက်ဆုကြေးငွေ / es များအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များအတွက်စီမံခန့်ခွဲရန်စုပြုံမှစတင်ပြီးမီကပထမဦးဆုံးဆုကြေး၏အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ရပါမည်, သင့်ရဲ့ဟန်ချက်နေရာကမဟုတ်လျှင် 0.00, သောအမှု၌သင်တို့စီမံခန့်ခွဲရန်လာမည့်ဆုကြေးငွေ၏အာမခံလိုအပ်ချက်များကို၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စုဆောင်းခံရဖို့စတင်မည်. .
သာ 5% ဗီဒီယိုဖဲချပ်နှင့် / သို့မဟုတ်အာဏာကိုဗီဒီယိုဖဲချပ်များအားလုံးဗားရှင်းအပေါ်ထားရှိကစားနည်း၏သက်ဆိုင်ရာဆုကြေးငွေများအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်မျက်နှာသို့ရေတွက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်, မြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ်အထူးကမ်းလှမ်းမှုကို; သာ 10% Baccarat ရှိသမျှကိုဗားရှင်းအပေါ်ထားရှိကစားနည်း၏, Roulette, နှင့် / သို့မဟုတ်ဖဲချပ်စားပွဲဂိမ်းသက်ဆိုင်ရာဆုကြေးငွေများအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်မျက်နှာသို့ရေတွက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်, မြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ်အထူးကမ်းလှမ်းမှုကို.
မှတ်ပုံတင်ထားသောကစားသမားကာကွယ်တားဆီးဖို့လက်ျာကျနော်တို့ချန်ထားသော, logging ၌ဖြစ်စေပါဝင်နှင့်မဆိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုပရိုမိုးရှင်းနှင့်ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ခြင်းမှအချို့သောတရားစီရင်မှုကနေ depositing, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိမှာ. ဒီအပိုဆုပေါ်လစီဆုကြေးငွေများအားလုံးကြင်နာသက်ဆိုင်, သငျသညျဖြင့်အမှန်တကယ်သိုက်၏ပိုလျှံ၌သင်တို့ကိုမှခွင့်ပြုပရိုမိုးရှင်းနှင့်အကျိုးအမြတ်.
ဒီအပိုဆုမူဝါဒအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာရေးဆွဲခဲ့. ဒီအပိုဆုမူဝါဒကိုမဆိုထားသောဗားရှင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဗားရှင်းအကြားမည်သည့်ကွာဟမှု၏အဖြစ်အပျက်အတွက်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဗားရှင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမနိုင်ရကြလိမ့်မည်.